Ahoana ny famolavolana Mac na kapila mafy ivelany amin'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba famolavolana kapila mafy amin'ny Mac
Amin'ireo raharaha toa an'io dia tadidiko foana ny fotoana voalohany nikasihako Mac: tsy maintsy naka ny findaiko Symbian aho, mifandray amin'ny Messenger ary manontany ny fomba hidirana amin'ny MSN amin'ny solosainako vaovao. Ny olana amin'ny fanovana ny rafitra fiasa dia ny nanovan'izy ireo antsika rehetra, ka raha vaovao isika switcher ianao efa nanao ny switch anao avy amin'ny Windows mankany OS X, mety tsy fantatray angamba ny fomba famolavolana kapila mafy ivelany amin'ny Mac.
Ekena fa tsotra ny fizotrany, saingy tsy mitovy amin'ny an'ny Windows izy io, izay mila tsindrio fotsiny ny bokotra havanana amin'ny tsindrio ary safidio ny "Format". Mba hahatratrarana izany ao amin'ny Mac OS X dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny fampiharana Fitaovana kapila izay misy ao amin'ny fampirimana Utilities, izay avy eo dia ao anatin'ny folder Applications. Avy eo hasehonay anao ny fomba mamolavola kapila mafy ivelany amin'ny Mac (izay tsy hafa noho ny famolavolana Pendrive).
1 Ahoana ny fomba famolavolana Hard Drive ivelany amin'ny Mac
2 Karazana endrika
3 Azoko atao ve ny mamolavola kapila mafy ao amin'ny NTFS amin'ny Mac?
4 Azoko atao ve ny mamafa ny kapila amin'ny Mac nefa tsy mila mamolavola azy?
5 Ahoana ny famolavolana Mac
6 Tombontsoa amin'ny famolavolana Mac
7 Ahoana ny famolavolana Mac tsikelikely
Ahoana ny fomba famolavolana Hard Drive ivelany amin'ny Mac
Manokatra ny Disk Utility izay, araka ny efa nolazainay, dia ao amin'ny làlan'ny Applications / Utilities. Azontsika atao ihany koa ny manokatra azy amin'ny Launchpad ary miditra amin'ny folder hafa na manokatra Spotlight ary manomboka manoratra ny anarany (ny fomba farany no tiako indrindra).
Ao amin'ny Disk Utility dia misafidy ny kapila mafy tadiavintsika hamolavola endrika izahay ary mitandrina mba tsy hisafidy kapila hafa izay mety nampifandraisintsika tamin'ny Mac tamin'izany fotoana izany.
Manaraka, tsindrio eo amin'ny «Delete».
Safidintsika ny karazana endrika tadiavintsika.
Ary farany, tsindrio eo amin'ny «Delete» indray.
Mora ny fizotrany, sa tsy izany? Saingy, arakaraka ny filantsika dia hamolavola ny kapila amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa isika.
Izany no Endrika Apple, hametraka azy amin'ny fomba haingana sy mora. Raha mamolavola kapila mafy hampiasantsika amin'ny solosaina Mac isika dia azo inoana fa io no endrika tsara indrindra azontsika ampiasaina, satria haingana kokoa ary mandeha tsara kokoa ny zava-drehetra. Fa ny olana dia izao dia maro ny solosaina ary tsy fantatsika hoe rahoviana isika no hampiasa azy io miaraka amin'ny rafitra fiasa hafa, noho izany dia tokony ho mazava tsara fa raha mamolavola azy amin'ny Mac OS X Plus isika dia tsy afaka mamaky na manorata azy amin'ny solosaina hafa. Tsy hizara ity endrika ity, andao handeha.
Azontsika atao ny milaza fa ny FAT no endrika manerantany. Ao amin'ny Windows dia ho hitantsika amin'ny FAT32 izy io ary raha apetratsika amin'ity endrika ity dia afaka mamaky sy manoratra vaovao amin'ny rafitra fiasa rehetra, izay misy ny Mac, Windows, Linux ary na ny fitaovana finday na consoles aza.
Ny olana amin'ity endrika ity dia izay ny fisie hatramin'ny 4GB ihany no tohanany, ka tsy afaka nitondra sarimihetsika mitovy habe amin'ny DVD (4,7GB) izahay amin'ny kapila mafy USB na format FAT. Manana ny vahaolana hizara azy foana isika, saingy mety hanahirana izay tsy mendrika izany.
Ny endrika mahaliana amin'ny computing dia ExFAT. Izany dia azo vakiana avy amin'ny Mac, Windows ary Linux, saingy tsy ho vitan'izy ireo ny mamaky na manoratra azy amin'ny karazana fitaovana hafa, toy ny telefaona finday, console, fahitalavitra, sns. Raha tsy maintsy mitondra data eo anelanelan'ny solosaina ianao dia mendrika io endrika io. Raha toa ka tsy maintsy ampiasaina amin'ny karazana fitaovana bebe kokoa ny tarikao dia aleo mampiasa FAT.
Azoko atao ve ny mamolavola kapila mafy ao amin'ny NTFS amin'ny Mac?
Eny, fa miaraka amin'ny nuansa. Ny solosaina Apple dia mahavita azy rehetra. Raha ny marina dia afaka mametraka Windows amin'ny Bootcamp isika ary mampiasa ny programa rehetra ao aminy. Saingy satria ny tadiavinay dia ny mamolavola kapila ao amin'ny NTFS ao amin'ny OS X, ka tsy safidy io. NTFS no endrika Windows natoraly, noho izany tsy ho afaka hiasa aminy amin'ny Mac hatrany ivelan'ny boaty isika.
Raha mamolavola kapila mafy ao amin'ny NTFS mampiasa Mac dia tsy maintsy mametraka azy isika rindrambaiko fahatelo izay, araka ny noeritreretinao azy, dia voaloa. Ny roa amin'ireo programa tsara indrindra dia ny Paragon NTFS ho an'ny Mac (Download) ary Tuxera NTFS ho an'ny Mac (Download). Raha vantany vao alaina sy apetraka ny iray amin'ireo programa roa dia afaka mamaky sy manoratra amin'ny kapila misy endrika NFTS izahay, ary koa mamolavola azy amin'ny Mac mihitsy.
Azoko atao ve ny mamafa ny kapila amin'ny Mac nefa tsy mila mamolavola azy?
Ekena fa mety ho kivy be izany raha tsy haintsika ny manao azy. Ao amin'ny rafitra fiasa Unix miorina dia tsy afaka mamafa ny angon-drakitra ao anaty kapila ivelany fotsiny ianao, tsia. Ho fiarovana, rehefa mamafa ny angona avy amin'ny kapila ivelany amin'ny Mac sy Linux izahay, dia ho lasa a fampirimana miafina antsoina hoe ".Trash". Hanombohana azy, raha tsy hitantsika izy dia ho fantatsika fotsiny fa lany ny habaka kapila. Ahoana no hamahana an'io olana tsy mahazo aina io? Eny, mora be izy io ary tsara kokoa ny mianatra manafoana angona avy amin'ny kapila ivelany alohan'ny handehanany any amin'ny fako.
Raha te hamafa ny angona avy amin'ny kapila ivelany na USB amin'ny Mac dia tsy maintsy ataontsika amin'ny dingana roa izany: amin'ny voalohany dia hanindry ny fanalahidy Control isika, ary tsy hamoaka azy dia hisintona ny rakitra na fisie izay tadiavintsika hamafa ny biraonao. Amin'ny alàlan'ny fanindriana Control izay ataontsika dia "mihetsika" izy ireoNoho izany, na dia mandika izany amin'ny birao misy antsika aza izy dia hanala azy tanteraka amin'ny fiara ivelany. Ny fanindroany dia lozika, mamafa ny rakitra amin'ny alàlan'ny famindrana azy any amin'ny fako.
Raha efa nofafanao ny angon-drakitra dia tsy mahita na inona na inona ao amin'ny Finder ianao ary mitohy mitazona habaka ny kapila, tsy maintsy manao zavatra mitovy amin'ny nohazavainay tamin'ny dingana teo aloha ianao, fa aloha tsy maintsy mandray ny teo aloha isika dingana: sokafy a Terminal (izay azontsika idirana amin'ny alàlan'ny zotra mitovy amin'ny Disk Utility) ary soraty izao baiko manaraka izao:
defaults manoratra com.apple.finder AppleShowAllFiles MARINA
Aiza no tsy maintsy hametrahantsika ny "MARINA" hahitantsika ireo rakitra miafina na "DISO" ka mbola miafina ireo rakitra miafina. Rehefa jerena tsara ireo rakitra miafina dia afaka mitady ilay folder «.Trash» isika ankehitriny (ny teboka eo alohany dia midika hoe miafina), sintomy ny angona amin'ny birao ary avy eo mankany amin'ny fako.
Manomboka izao dia azoko antoka fa tsy manana olana intsony ianao rehefa mamolavola kapila mafy amin'ny Mac.
Ahoana ny famolavolana Mac
Masinina tonga lafatra ny Mac, saingy "akaiky" ihany. Na eo aza ny fahombiazany lehibe, ny heriny ary ny fampiasana ny maodely rehetra amin'ny solosaina PC, ny marina dia izany "Junk" koa miangona ao amin'ny solo-sainay Mac avy amin'ny rindranasa efa nesorinay, ny mpikirakira fampiharana izay tsy fantatsika akory dia mbola misy, fanavaozana, cookies, cache ary maro hafa. Noho izany, indraindray dia tonga mora ampiasaina izy io amboary ny Mac ary avelao ho toy ny vaovao avy amin'ny ozinina. Ho fanampin'izay, raha tianao, dia azonao atao ny manary ny nomaninao ho an'ny Time Machine, na dia tsy manoro hevitra anao aza aho satria io koa dia hanary ny ampahan'ny "fako", na ireo lahatahiry nanaovanao kopia teo amin'ny kapila mafy tany ivelany .
Tombontsoa amin'ny famolavolana Mac
Raha vantany vao namolavola ny Mac anao ianao, dia hahita tombony roa avy hatrany:
Ny tahiry HDD na SSD an'ny Mac anao dia manana be dia be ankehitriny toerana malalaka kokoa, eny fa na dia nametraka indray aza ireo rindranasao ary efa nanary backup teo aloha aza.
Ny macanao izao miasa milamina kokoa noho ny teo aloha, haingana sy mahomby kokoa izy io.
Ahoana ny famolavolana Mac tsikelikely
Raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny solosainanao, dia tonga ny fotoana handrafetana ny Mac anao, zavatra tsotra toy ny fanarahana ireto dingana manaraka amin'ny taratasy ireto:
Manaova kopia nomaniny ho solon'izay Mac misy Time Machine anao na alaivo amin'ny kapila mafy ivelany izay tianao ampitaina aorian'izay ho any Mac Mac misy endrika: antontan-taratasy, sary, horonan-tsary ... Raha tsy mila an'izany ianao satria ny zavatra rehetra dia nampiantranoina ny rahona, azonao atao ny mandingana ity dingana ity.
Sokafy ny Mac App Store ary ampidino indray ny tsimbadika farany an'ny installer macOS.
Mandritra izany fotoana izany, mankanesa any ity tranonkala ity ary ampidino ny fitaovana Disk Maker
Vantany vao alaina ny macOS sy DiskMaker, alao antoka fa manana izany ianao karatra SD na pendrive farafaharatsiny 8GB fahaiza-manao ary ampifandraiso amin'ny Mac.
Mandrosoa ny fampiharana DiskMaker ary araho ny torolalana omeny. Mila mifidy ny rafitra fiasa sy ny pendrive nampifandraisinao fotsiny ianao ary mampiditra ny tenimiafin'ny mpandrindra anao. Hanomboka ny dingana iray avy eo izay hamorona a kapila amin'ny pendrive voalaza. Manàna faharetana, maharitra fotoana fohy ny fizotrany ka aza manao na inona na inona mihitsy mandra-pahatongan'ny hafatra miseho eo amin'ny efijery izay manondro fa efa vonona ny zava-drehetra.
Vantany vao vita ny fizotrany dia sokafy ny "System Prefers" à "Startup Disk". Safidio ny kapila boot (ny pendrive noforoninao) ary kitiho ny famerenana. Raha voatosika dia hamafiso ny hetsika ary andraso ny Mac anao hiakatra miaraka amin'ny installer macOS eo amin'ny efijery.
Safidio izao ny "Disk Utility", safidio ny fizarazarana ankehitriny amin'ny Mac anao ary tsindrio ny bokotra Delete manao izay hitazomana azy amin'ny endrika "Mac OS Plus (Journaled)". Io dia hamafa ny rafitra miasa rehetra ankehitriny, avela madio ny Mac ho an'ny fametrahana vaovao.
Atsaharo ny "Disk Utility" ary manohiza amin'ny fizotry ny fametrahana macOS toy ny mahazatra.
Rehefa voatosika, ampidiro ny Apple ID, ary ny Mac "vaovao" anao dia hampifangaro ho azy ny tsoratadidy, ny tantara, ny tsoratadidy, ny atiny Apple Music, ny sary sy ny horonan-tsary avy amin'ny fampiharana Photos, antontan-taratasy sy rakitra voatahiry ao amin'ny iCloud Drive, sy maro hafa.
Nota: Raha efa namolavola azy hivarotra ianao dia aza miditra ny Apple ID anao, amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mamono azy mba hahafahan'ny tompony vaovao manamboatra azy.
Ary Voilà! Efa nandrafitra ny Mac-nao ianao ary ankehitriny azonao atao izao ny mankafy ny kinova farany an'ny rafitra fiasa amin'ny fametrahana madio tanteraka. Ho tsikaritrao avy hatrany fa mihazakazaka haingana sy malama kokoa ny Mac anao, ary manana toerana fitahirizana malalaka kokoa izy io.
Izao dia mila manokatra ny Mac App Store fotsiny ianao, mankanesa any amin'ny fizarana "Vidina", ary manomboka misintona sy mametraka ireo rindranasa ampiasainao matetika. Tombony lehibe iray hafa koa ny fampiharana ireo fampiharana ireo amin'ny endriny farany, fa tsy havaozina aorian'ny fanavaozana.
Ary farany, raha manontany tena ianao hoe isaky ny ahoana no tokony hametrahanao Mac, dia holazaiko aminao fotsiny hoe manao aho indray mandeha isan-taona, mifanaraka amin'ny famoahana ny kinova vaovao, ary dia mandeha tsara foana ny ekipako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba famolavolana kapila mafy amin'ny Mac
nickyhelmut dia hoy izy:
Salama, misaotra tamin'ny fanampianao. Nataoko izay nolazainao ary raha ampitomboiko kely ny fahafahan'ny habaka malalaka ao amin'ny fitehirizana, fa ankehitriny ny haben'ny sary, feo ary sarimihetsika dia tsy aseho eo amin'io varavarankely io intsony, toy ny taloha ihany. Azafady, ahoana no hataoko amin'ny fitehirizana fampisehoana azafady.
Mamaly an'i nickyhelmut
Toa ampy tokoa ny nanafoana ny fako hahitana ny hasarobidin'ny video, audio, sary ary nomaniny ho solon'izay. Ny fisalasalako dia ny fiovan'ny ampahany betsaka amin'ny momba izay nananany talohan'ny nanaovany ny dingana notoroanao (ny sokajy hafa dia lehibe raha oharina amin'ny ambiny eny an-dalana, saingy heveriko fa ara-dalàna izany). Na izany na tsy izany, raha manana sosokevitra ianao hanatsarana ny fahombiazan'ny «MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)» dia tiako izany satria tsapako fa nihena izy io ary indraindray dia mila fotoana be ny famonoana azy ary indraindray mihantona mandritra ny fotoana kelikely fa mety.
Salama Manana kapila mafy multimedia aho, ary te-hamolavola azy amin'ny NTF. miaraka amin'ny mac kapiteny na rafitra xs
ahoana no hahavitako azy
tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny Mac sy avy amin'ny safidy Disk Utility araho ireo dingana ao amin'ilay lahatsoratra momba ilay foraging OS X Plus (miaraka amin'ny fisoratana anarana)
Nohavaozina ny Pro-ko nefa lasa niadana loatra, avy amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 Ram ve sa omena soso-kevitra hametraka azy? Misaotra anao
alvaroque2014 dia hoy izy:
Sony 4K dia mamaky kapila amin'ny exfat
Valio ny alvaroque2014
Daviss dia hoy izy:
Salama tsara, ahoana no ahafahako mamolavola mac misy HDd anatiny 2, iray mafy ary iray "normal" iray?
tsy manana mifanentana tsara izy io, ary andiany pro samsung ssd 840 ity.
Valiny tamin'i Daviss
"Tsy misy mifanentana ny endriny, ary andiany samsung ssd 840 pro io."
tsara fa izay no voalaza ao amin'ny "momba an'ity mac ity"
Ovaiko ny kapako mafy tany am-boalohany satria ratsy. Noraisiko izany toe-javatra izany rehefa nanandrana nametraka ny kapiteny aho ary nanidy tampoka ilay masinina. Tao amin'ny Apple dia nitady olana aho, bbut ary nilaza izy ireo fa kapila mafy. Tsy manana kapila boot aho.
Manova kapila mafy 1 TB SSHD vaovao aho, ary mametraka RAM 16 GB vaovao alohan'ny 4 GB. Niverina tany Apple indray aho ary tsy afaka nametraka ny kapiteny izy ireo. Nanao fitsapana tamin'ny milina hafa sy RAM aho raha toa ka mandeha izany. Ny teknisianina dia nanao fitsapana mafy ary nandaitra ihany koa. Niasa koa ny microprocessor.
Eto ny angona avy amin'ny solosainako, mety hanana olana mitovy amin'izany ve ny sasany
Macbook pro amin'ny salan'isa 2010, nametraka an'i Snow Leopard. Hard drive tsy nety dia 500GB sy Ram 4GB. Mifamadika amin'ny kapila mafy 1TB sy RAM 16GB aho.
miarahaba, misaotra an'ny tanana teo aloha
Gabriel Martinez dia hoy izy:
namana manana pro macbook an'ny nenitoako aho izay manana pasword efi ny biôsy ary tsy manana ny kaontin'ny mpampiasa ny rafitra fiasa te-hamolavola azy aho satria afaka manao azy
Mamaly an'i gabriel martinez
Salama sakaizako avy any Mac aho!
Manana Hard Drive ivelany vaovao aho, ary mila mamolavola azy aho hampiasa azy amin'ny iMac. Ity no modely My Passport WD. Mitranga ny manao ny dingana hanatanterahako ny endrika, fa rehefa tonga eo amin'ny varavarankely farany aho ary tsindrio ny hamafa,
misy hafatra milaza amiko: "Tsy nahomby ny fanesorana ny volume noho ny lesoka: tsy azo nesorina ny kapila"
Fotoana hafa: »Tsy afaka nosokafana ny kapila» ary nijanona tsy nanjavona intsony ilay sary voafafa, ary mijanona ho tsy misy endrika kosa ny Diska
Azonao atao ve ny milaza amiko ny olana ??? Misaotra sy arahaba. Carlos.
sarotra dia hoy izy:
Salama Nametraka kapila SSD Crucial vaovao aho tamin'ny tapaky ny taona 2010 MBP izay nohavaozina tamin'i Sierra. Miezaka manavao ny kapila aho ary tsy hamela ahy hamafa. Ny sarintany fizara dia voatanisa ho tsy mifanaraka.
Raha manandrana mamerina amin'ny laoniny ny masinina aho dia mitady hatrany ilay kapila misy azy io. Heveriko fa satria tsy voaforona.
Ahoana ny fomba hahatratrarako ny fanovana endrika sy ny mifanentana?
Mamaly an'i sortizrosa
salama .. mieritreritra ny hividy kapila henjana multimedia WD aho. fa ny mpivarotra kosa milaza amiko fa ny format MAC, MAC OS PLUS ihany no tohanany.
ny fanontaniako dia hoe raha mahavita zavatra ianao ... apetraho izany sa zavatra hafa hahomby amin'ny alàlan'ny windows?
Canon digital, Aetna dia manome Apple Watch, 1.000 miliara ho an'ny fahitalavitra ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ny fivoaran'ny macOS amin'ny horonan-tsary latsaky ny 2 minitra